Jọshụa 8 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
8 Jehova wee sị Jọshụa: “Atụla egwu, atụkwala ụjọ.+ Kpọrọ ndị agha niile bilie, gbagoo E-aị. Lee, enyefewo m eze E-aị na ndị ya na obodo ya na ala ya n’aka gị.+
2 Meekwa E-aị na eze ya dị nnọọ ka i mere Jeriko na eze ya.+ Ọ bụ naanị na unu ga-ebukọrọ ihe unu ga-akwata n’ime ya na anụ ụlọ ya.+ Mee ka ndị agha gị ụfọdụ zoo n’azụ obodo ahụ.”+
3 Jọshụa na ndị agha niile+ wee bilie gbagoo E-aị, Jọshụa wee họrọ puku ndị ikom iri atọ, ndị dimkpa bụ́ dike,+ wee zipụ ha n’abalị.
4 O wee nye ha iwu, sị: “Lee, unu ga-ezo+ n’azụ obodo ahụ. Unu agala ebe dị nnọọ anya n’obodo ahụ, unu niile ga-adịkwa njikere.
5 Mụ na ndị niile mụ na ha so ga-aga obodo ahụ nso. Ọ ga-erukwa na, ọ bụrụ na ha apụta ịbịa buso anyị agha dị ka ha mere na mbụ,+ anyị ga-agbara ha ọsọ.
6 Ha ga-achụrụkwa anyị pụta ruo mgbe anyị rapụtara ha n’obodo ahụ, n’ihi na ha ga-asị, ‘Ha na-agbara anyị ọsọ dị ka ha mere na mbụ.’+ Anyị ga-agbara ha ọsọ.
7 Mgbe ahụ, unu ga-esi n’ebe unu zoro bilie, unu ga-ewegharakwa obodo ahụ; Jehova bụ́ Chineke unu ga-enyefekwa ya n’aka unu.+
8 Ọ ga-erukwa na ozugbo unu weghaara obodo ahụ, unu ga-esunye obodo ahụ ọkụ.+ Unu ga-eme dị nnọọ ka okwu Jehova si dị. Lee, enyewo m unu iwu.”+
9 Jọshụa wee zipụ ha, ha wee gaa n’ebe ha ga-ezo, maakwa ụlọikwuu n’agbata Betel na E-aị n’ebe ọdịda anyanwụ E-aị, ma Jọshụa rahụrụ n’etiti ndị agha nke ya.
10 Jọshụa wee bilie n’isi ụtụtụ+ ma nyochaa ndị agha nke ya, ya na ndị okenye Izrel wee duru ndị agha ahụ gbagoo E-aị.
11 Ndị agha niile+ ya na ha so gbagokwara, ka ha wee jeruo n’ihu obodo ahụ, ha wee maa ụlọikwuu n’ebe ugwu E-aị, ndagwurugwu adịrịkwa n’agbata ha na E-aị.
12 Ka ọ dị ugbu a, ọ kpọọrọ ihe dị ka puku ndị ikom ise wee mee ka ha zoo+ n’agbata Betel+ na E-aị, n’ebe ọdịda anyanwụ obodo ahụ.
13 Ndị agha ahụ wee mee ka ndị agha ka n’ọnụ ọgụgụ nọrọ n’ebe ugwu obodo ahụ,+ meekwa ka ndị ọzọ zoo n’ebe ọdịda anyanwụ obodo ahụ,+ Jọshụa wee banye n’etiti ndagwurugwu ahụ n’abalị ahụ.
14 O wee ruo na ngwa ngwa eze E-aị hụrụ ya, ya na ndị ya niile, bụ́ ndị ikom obodo ya, mere ọsọ ọsọ bilie n’isi ụtụtụ gaa ibuso Izrel agha, n’oge a kara aka, n’ihu mbara ọzara. Ma ọ maghị na e nwere ndị zoro n’azụ obodo ahụ.+
15 Mgbe Jọshụa na Izrel dum mere ka à ga-asị na e meriwo ha,+ ha si n’ụzọ ala ịkpa gbaa ọsọ.+
16 E wee kpọpụta ndị niile nọ n’obodo ahụ ka ha chụwa ha, ha wee chụwa Jọshụa, e wee rapụta ha n’obodo ha.+
17 Ọ dịghịkwa nwoke ọ bụla fọdụrụ n’ime E-aị nakwa Betel nke na-achụrụghị Izrel gawa, nke mere na ha ghewere ọnụ ụzọ ámá obodo ahụ oghe wee chụwa Izrel.
18 Jehova wee sị Jọshụa: “Setịa árọ̀ ahụ i ji n’aka n’ebe chere E-aị ihu,+ n’ihi na n’aka gị ka m ga-enyefe ya.”+ Jọshụa wee setịa árọ̀ ahụ o ji n’aka n’ebe chere obodo ahụ ihu.
19 Ndị agha ahụ zoro ezo wee si n’ebe ha nọ bilie ngwa ngwa, ha wee malite ịgba ọsọ ozugbo o setịrị aka ya, ha wee banye n’obodo ahụ ma weghara ya.+ Ha wee mee ngwa ngwa sunye obodo ahụ ọkụ.+
20 Ndị E-aị wee tụgharịa lee anya n’azụ, ma, lee, anwụrụ ọkụ obodo ha nọ na-akwụgo eluigwe, ike adịghịkwa ha ịgbaga ebe ọ bụla. Ndị agha ahụ bụ́ ndị gbaara gawa n’ala ịkpa wee tụgharịa buso ndị ahụ na-achụ ha agha.
21 Jọshụa na Izrel dum wee hụ na ndị agha ahụ zoro ezo+ ewegharawo obodo ahụ, nakwa na anwụrụ ọkụ obodo ahụ na-akwụli elu, ha wee tụgharịa malite igbu ndị E-aị.
22 Ndị nke ọzọ wee si n’obodo ahụ pụta ibuso ha agha, nke mere ka ha nọrọ Izrel n’etiti, ndị nke a nọ n’otu akụkụ, ndị nke ọzọ anọrọ n’akụkụ nke ọzọ, ha wee gbuo ha ruo mgbe ọ na-adịghị onye fọdụrụ n’ime ha ma ọ bụ onye gbalagara agbalaga.+
23 Ha jidekwara eze E-aị+ ná ndụ wee kpụrụ ya bịakwute Jọshụa.
24 O wee ruo na, ka Izrel nọ na-egbuchapụ ndị niile bi n’obodo E-aị bụ́ ndị nọ n’ọhịa, n’ala ịkpa ebe ha chụbara ha, ha ji ihu mma agha na-egbu ha, ha niile, ruo mgbe ha nwụchara. E mesịa, Izrel dum laghachiri E-aị wee jiri ihu mma agha bibie ya.
25 Ndị niile nwụrụ n’ụbọchị ahụ, ma nwoke ma nwaanyị, dị puku mmadụ iri na abụọ, ndị E-aị niile.
26 Jọshụa eweghachighịkwa aka ahụ o ji setịa árọ̀+ ahụ ruo mgbe o gbuchara+ ndị niile bi n’obodo E-aị.
27 Ọ bụ naanị anụ ụlọ na ihe ha kwatara n’obodo ahụ ka Izrel bukọọrọ, dị ka okwu Jehova nyere Jọshụa n’iwu si dị.+
28 Jọshụa wee gbaa E-aị ọkụ ma mee ka ọ bụrụ mkpọmkpọ ebe+ nke ga-adịru mgbe ebighị ebi, dị ka ihe tọgbọrọ n’efu ruo taa.
29 O wee kwụwa eze E-aị+ n’elu osisi ruo ná mgbede;+ mgbe anyanwụ na-achọ ịda, Jọshụa nyere iwu, ha wee butuo ozu+ ya n’osisi ahụ wee busa ya n’ọnụ ụzọ ámá obodo ahụ ma tụkọta nkume dị ukwuu n’elu ya, ruo taa.
30 Ọ bụ mgbe ahụ ka Jọshụa wuuru Jehova bụ́ Chineke Izrel ebe ịchụàjà,+ n’Ugwu Ibal,+
31 dị nnọọ ka Mozis bụ́ ohu Jehova nyere ụmụ Izrel n’iwu, dị ka e dere ya n’akwụkwọ iwu+ Mozis, sị: “Ebe ịchụàjà e ji nkume a na-awaghị awa wuo, nke a na-emetụghị ngwá ọrụ e ji ígwè kpụọ”;+ ha wee chụọrọ Jehova àjà nsure ọkụ na àjà udo n’elu ya.+
32 O wee depụta n’elu nkume+ ahụ iwu Mozis nke o deworo n’ihu ụmụ Izrel.+
33 Izrel dum na ndị okenye+ ha na ndị isi na ndị ikpe ha guzo n’akụkụ abụọ nke Igbe ahụ, n’ihu ndị nchụàjà,+ bụ́ ndị Livaị, ndị bu igbe ọgbụgba ndụ Jehova,+ tinyere ndị mbịarambịa na ụmụ afọ,+ otu ọkara n’ime ha guzo n’ihu Ugwu Gerizim,+ ọkara nke ọzọ eguzoro n’ihu Ugwu Ibal,+ (dị nnọọ ka Mozis ohu Jehova nyere n’iwu,)+ ibugodị ụzọ gọzie+ ndị Izrel.
34 E mesịa, ọ gụpụtara iwu ahụ dum+ n’olu dara ụda, ngọzi+ na nkọcha,+ dị ka ihe niile e dere n’akwụkwọ iwu ahụ si dị.
35 Ọ dịghị okwu ọ bụla dị n’ihe niile Mozis nyere n’iwu nke Jọshụa na-agụpụtaghị n’olu dara ụda n’ihu ọgbakọ Izrel dum,+ tinyere ndị inyom+ na ụmụntakịrị+ na ndị mbịarambịa+ ndị bi n’etiti ha.
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D6%26Chapter%3D8%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl